Android အတွက်အကောင်းဆုံးစစ်တုရင်ကစားနည်း ၅ ခု Androidsis
Android သုံးစွဲသူများသည်ဂိမ်းအမြောက်အမြားရရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးနိုင်သည့်အမျိုးအစားများအားလုံးရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူအားလုံးကသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုရှာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သူတို့မှာလူအများစုမသိတဲ့ဂိမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ စစ်တုရင်ကစားနည်းများ. Android မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်.
ဒီထက်ပိုဂန္ထဝင်ဆန်ပြီးအန္တရာယ်နည်းတဲ့အမျိုးအစားတစ်ခု၊ ဒီစစ်တုရင်ကစားနည်းကိုကစားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်နိုင်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Play Store သို့ ၀ င်လျှင်ရွေးစရာများစွာရှိသည်။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။
ဒီရွေးချယ်မှုကြောင့်သင်ပုံမှန်ကစားခြင်းထက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းအမျိုးအစားကိုလေ့ကျင့်နိုင်ပြီးပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရွေးချယ်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာ။ သူတို့အားလုံးကိုတွေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
1 စစ်တုရင် - ကစား၊ လေ့လာပါ
3 Magnus - စစ်တုရင်ကစားပါ
စစ်တုရင် - ကစား၊ လေ့လာပါ
၎င်းသည်သင်၏အဆင့်ကိုလေ့လာရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောဂိမ်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အဆင့်ဆင့်၏ကွဲပြားခြားနားသောပျဉ်ပြား 50.000 စုစုပေါင်းရှာတွေ့ကတည်းက။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအရိုးရှင်းဆုံးအဆင့်ကနေစတင်နိုင်ပြီးတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးပိုမိုပြည့်စုံသောစစ်တုရင်ကစားသမားဖြစ်လာရန်လေ့ကျင့်ရန်နည်းလမ်းကောင်း။ ကွန်ပျူတာကိုဆန့်ကျင်။ ကစားရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ဖိုရမ်တစ်ခုတွင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အကြံဥာဏ်များပါသောဆောင်းပါးများစွာရှိသည်။
ဂိမ်းကို Android တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းပေမယ့်ကျနော်တို့ဝယ်ယူမှုကိုရှာပါ။
အနည်းငယ်ကွဲပြားသောဂိမ်းတစ်ခုသာမကသင်၏အသိပညာကိုစိန်ခေါ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်ဤဂိမ်းကိုလောင်း။ ထိုဗဟုသုတမည်မျှရနိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ဂိမ်းထဲမှာကွဲပြားခြားနားသောပျဉ်ပြားရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်ကိုတိုးတက်အောင်ကူညီသည့်လှည့်ကွက်အသစ်များကိုသင်ယူနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဆင့်ဆင့်အတန်ငယ်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
ဒီဂိမ်းကို Android အတွက်ဒေါင်းလုတ်ဆွဲသည်။ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ရေးသားသူ: LR စတူဒီယို
Magnus - စစ်တုရင်ကစားပါ
နော်ဝေ Magnus Carlsen သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးစစ်တုရင်ကစားသမားဖြစ်သည်။ သူဟာကလေးဘ ၀ ကတည်းကစပြီးကတည်းကကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းမှာမှတ်တမ်းများစွာကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။ ဒီဂိမ်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတို့ဟာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားများထံမှတိုက်ရိုက်သင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကစားနည်းများ၊ ကစားနည်းများနှင့်ကစားသမား၏လူသိများသောရွေ့လျားမှုနှင့်ဂိမ်းများကိုဂိမ်းတွင်ပြသထားပါသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနော်ဝေဘာသာနဲ့အတန်းတက်နေသလိုမျိုးသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်းကို Android ပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အခြားဂိမ်းနှစ်ခုကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွင်း၌ ၀ ယ်ယူမှုများကိုတွေ့ရသည်။
Magnus ကိုကစားပါ - စစ်တုရင်ကစားပါ
ရေးသားသူ: Magnus ကစားပါ
ဂိမ်း၏နာမကိုပြီးသားကျွန်တော်တို့ကို၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပတ်သက်။ အရေးကြီးသောသဲလွန်စပေးသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ကစားနိုင်လိမ့်မည်။ ဒီဂိမ်းကကျွန်တော်တို့ကိုကမ္ဘာအနှံ့ကလူတွေကိုဆန့်ကျင်ကစားဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပေမယ့်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အလိုချင်ဆုံးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ဂိမ်းထဲမှာ built တစ် ဦး စကားပြောရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ကစားပွဲတစ်ခုဆုံးရှုံးခဲ့ပါက rematch ဟုခေါ်သော option ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေဒါမှမဟုတ်တခြားလူတွေကိုစိန်ခေါ်ရတာအရမ်းပျော်စရာကောင်းတယ်။
Android အတွက်ဒီစစ်တုရင်ကစားနည်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အခြားကိစ္စများတွင်ကဲ့သို့, ငါတို့ကအတွင်းပိုင်းဝယ်ယူမှုရှာပါ။
စာရင်းကိုဂန္တဝင်စစ်တုရင်ကစားနည်းဖြင့်ပိတ်လိုက်သည်။ ဒီအဓိပ္ပာယ်မှာကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူပိုမိုရိုးရှင်းတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုနှင့်တကယ့်ဂိမ်း၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်နီးစပ်သည့်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုပါရှိသည်။ ဒါကြောင့်သူကအခြားသူများလိုလှည့်ကွက်များသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်မှုများမများပါဘူး။ သို့သော်ဂိမ်း၏ရိုးရှင်းသည်၎င်း၏သီလတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဂိမ်းအကြောင်းကို 12 ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ရှိသည်။
ဒီဂိမ်းကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ယူလျှင်ယူရို ၁.၁၉ ယူရိုရှိသည်။ ၎င်းတွင်အတွင်း၌မည်သည့် ၀ ယ်ယူမှုများသို့မဟုတ်ကြော်ငြာများမရှိပါ။
ရေးသားသူ: AI အစက်ရုံလီမိတက်
စျေးနှုန်း: € 2,89
ဤငါးခုသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Android အတွက်ရှာနိုင်သောအကောင်းဆုံးစစ်တုရင်ကစားနည်းများဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုသင်စိတ်ဝင်စားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Android အတွက်အကောင်းဆုံးစစ်တုရင်ကစားနည်းများ